अलविदा ! फुटबल लिजेन्ट म्याराडोना : RajdhaniDaily.com
Home Editor-Picks अलविदा ! फुटबल लिजेन्ट म्याराडोना
व्यूनर्सआयर्स । अर्जेन्टिनी फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको हिजो बुधबार हृदयघातबाट निधन भयो । दुई साताअघि मात्रै राजधानी ब्युनर्स आयर्स नजिकको एक अस्पतालमा उनको मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरिएको थियो । त्यो शल्यक्रियापछि म्याराडोना एक साता अस्पतालमै रहेरका थिए । अघिल्लो महिना मात्र ६०औं जन्मदिन मनाएका उनलाई क्रिस्टियानो रोनाल्डोदेखि पेलेसम्मका स्टारले शुभकामना दिएका थिए ।
म्याराडोना फुटबल इतिहासका लिजेन्ट हुन् । उनले अर्जेन्टिनालाई सन् १९८२ र १९८६ मा दुईपटक वर्ड कपको उपाधि दिलाएका थिए । पछिल्लो उपाधि जित्दा उनले ५ गोल गरेका थिए भने ५ गोलका लागि सहयोग गरेका थिए । डिएगो सर्वश्रेष्ठ खेलाडी मात्र घोषित भएनन्, गोल्डेन बल पनि उनैले पाएका थिए ।
१५ वर्षकै उमेरमा अर्जेन्टिनाको पेशेवर खेलाडीका रुपमा देखापरेका उनले १६७ म्याच खेले र ११५ गोल ठोकेका थिए
अर्जेन्टिनामा मात्र होइन त्यसबेलादेखि डिएगो म्याराडोना विश्व चर्चित बनेका हुन् । कुनै समय ड्रग्स र रक्सीका कारण चर्चामा आएको महान फुटबलर म्याराडोनाको निधनमा अर्जेन्टिनी फुटबल एशोसिएसनले शोक मनाउने भएको छ । डिएगो म्याराडोनाले चार पटक वर्डकपमा भाग लिएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस एपीएफ र आर्मी सेमिफाइनलमा
१० वर्षको उमेरदेख उनले स्थानीय क्लब एस्त्रोला रोसामार्फत फुटबल खेल्न सुरु गरेका हुन् । डिएगो म्याराडोना असाधारण खेलका कारण चर्चित बनेका हुन् । १५ वर्षकै उमेरमा अर्जेन्टिनाको पेशेवर खेलाडीका रुपमा देखा परेका उनले १६७ म्याच खेले र ११५ गोल ठोकेका थिए । १९९७ मा म्याराडोनाले खेलजीवनबाट सन्यास लिएका थिए । त्यो दिन उनको बर्थडे थियो ।
सन् २००८ लियोनल मेस्सीको टिमको कोच बनेका थिए । पछिल्लो समय अर्जेन्टिनी टोली जिम्नासिया ला प्लाटाको प्रशिक्षकका रुपमा रहेका उनले ३० अक्टोवरमा प्यात्रोनाटो विरुद्धको खेलमा ३–० को जित दिलाएका थिए । उक्त खेलमा उनले आफुलाई अस्वस्थ महसुस गर्दै चाँडै नै टचलाईन छाडेका थिए ।
यसअघि म्याराडोना कोरोना भाइरसको कारण सेल्फ आइसोलेसनमा रहेका थिए । उनको बडीगार्डलाई कोरोना देखिएपछि उनी सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका हुन् ।
एजेन्सी - April 3, 2020
लन्डन । जर्मन प्रशिक्षक योर्गेन क्लोपले इंग्लिस क्लब लिभरपुलमा उत्कृष्ट समय व्यतीत गरिरहेका छन् । उनकै प्रशिक्षणमा लिभरपुलले अघिल्लो सिजनको युरोपेली क्लब...
एजेन्सी - September 18, 2020
सप्तरी राजविराज । भारतको विभिन्न शहरवाट घर र्फिर्कनेको संख्या तिब्र बनेको छ । यसै क्रममा आइतवार सप्तरीको विभिन्न नाकावाट ६ महिला सहित ६८ जना...
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - December 30, 2020
प्रदेश २ सुजीतकुमार झा - July 27, 2020